Mikasa ny hanafatra Boeing 777-200LR iray i Turkmenistan Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mikasa ny hanafatra Boeing 777-200LR iray i Turkmenistan Airlines
Jona 19, 2019
Mpanoratra Dmytro Makarov
Boeing sy Turkménistan Airlines, ny mpitatitra nasionalin'ny Turkmenistan, androany dia nanambara ny drafitry ny kaompaniam-pitaterana hanitarana ny asany maharitra amin'ny alàlan'ny fanampiana 777-200LR fahefatra (Long Range) fiaramanidina mankamin'ny andian-tsambony.
Ny fanoloran-tena, sarobidy $ 346.9 tapitrisa amin'ny vidin'ny lisitra, dia ho hita taratra ao amin'ny tranokalan'ny Orde and Deliveries an'ny Boeing rehefa vita izany.
Ny Boeing 777-200LR no fiaramanidina ara-barotra lava indrindra eto an-tany, afaka mampifandray saika ny tanàna roa eran'izao tontolo izao tsy miato. Manana halavirana 15,843 kilometatra farany ambony (8,555 nmi) izy ary mitondra mpandeha sy entana betsaka kokoa lavitra noho ny jetliner hafa. Ny 777-200LR dia manana maotera maotera GE90-110B1L mahery, ary mahazaka mpandeha hatramin'ny 317 ao anaty fikirakirana kilasy roa.
“Ny 777 no fiaramanidina kambana mahomby indrindra eran-tany, fiaramanidina lavitra ary ny 777-200LR no fiaramanidina mety hanampy ny Turkmenistan Airlines hampitombo ny asany iraisam-pirenena Eoropa, Asia ary ny any ankoatra, ”hoy Ihssane Mounir, filoha lefitra ambony amin'ny varotra varotra sy marketing ho an'ny The Boeing Company. “Mpiara-miasa i Turkménistan Airlines sy Boeing nanomboka tamin'ny 1992 ary voninahitra ho anay ny fahatokisan'izy ireo ny fahatokisany ny fiaramanidina Boeing.”
Ny 777-200LR vaovao dia ny fiaramanidina faha-32 novidian'ny Turkmenistan Airlines avy any Boeing. Turkmenistan ny mpitondra saina, miorina ao Ashgabat, miasa modely 737, 757 ary 777. Mandeha mpandeha manodidina ny 3,000 isan'andro ao amin'ny firenena ny zotram-piaramanidina ary mpandeha efa ho roa tapitrisa isan-taona amin'ny zotra iraisam-pirenena sy anatiny.
Boeing no orinasa aerospace lehibe indrindra manerantany ary mpamatsy fiaramanidina ara-barotra, rafitra fiarovana, habakabaka sy fiarovana ary serivisy manerantany. Manohana ireo mpanjifan'ny varotra sy governemanta any amin'ny firenena maherin'ny 150 ny orinasa. Boeing dia mampiasa olona mihoatra ny 150,000 manerantany ary mampiasa ny talenta toeran'ny mpamatsy manerantany. Miorina amin'ny lova fitarihana aérospace, Boeing dia mitarika hatrany amin'ny teknolojia sy ny fanavaozana, manolotra ho an'ny mpanjifany ary mampiasa vola amin'ny olony sy ny fitomboany amin'ny ho avy.
Ny safidy fisakafoanan'ny zatovo sy tweens dia mahatratra ny kintana amin'ny sambo fitsangantsanganana
"Fiaraha-mandeha amin'ny fahavaratra": zarao ny vidin'ny sidina sy hotely
Tany fandefasana manokana any Korea ny tany Korea
IATA: hanimba ny fanarenana ara-toekarena, asa maratra ny fiakarana fiampangana amin'ny seranam-piaramanidina Espaniola
Ny triatra amin'ny fiarandalamby haingam-pandeha dia miteraka 'fikorontanana lehibe' amin'ny serivisy fiarandalamby any UK
Anguilla dia nanambara ny fisokafan'ny sisintany 25 mey
Teknolojia fitsangatsanganana: Be amin'ny tsenan'ny dia Arabian
Hiakatra avo roa heny ny vidin'ny tapakila Disney Parks amin'ny taona 2031
Mandosira mankany Nevis